उपनिर्वाचनअघि नै मन्त्रीहरूको हेरफेर !
प्रकाशित: सोमबार, कात्तिक २५, २०७६, १६:५२:३१ धिरज बस्नेत
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्।
सरकार गठन भएको २० महिनापछि सचिवालय परिवर्तनको निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसमेत फेर्ने तयारी गरेका हुन्।
चित्त बुझ्दो काम नगरेका र सरकारलाई विवादित बनाएका मन्त्रीहरू हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने ओलीको तयारी छ। ओलीले यससम्बन्धमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आइतबार छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मंसिर १४ को उपचुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। केहीबाहेक अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीले आधाभन्दा धेरै मन्त्री फेर्ने तयारी गरेका छन्।
मन्त्रीहरूको कार्यशैली चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएकामा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । केही समयअघि भएको समीक्षा बैठकमा कामै नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री विशेषगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरको कार्य सम्पादनप्रति पटक्कै सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतसँग पनि उनी सन्तुष्ट छैनन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयका कामसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । सरकारमा समाजवादी पार्टीबाट उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई छन् । तर, समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरू हटाउँदा उक्त दलले सरकार नै छोड्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सहज छैन।
उता समाजवादी पार्टी आफैंले संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना माग पूरा नभए सरकार छोड्ने बताउँदै आएको छ।
सरकार नै मान्दैन अदालतको आदेश, कैद सजाय तोकिएका एक लाख १९ हजार अझै जेलबाहिर
‘आकर्षक’ प्रस्तावसहित तानातानमा देउवा!
२२ दिनसम्म छाताले गुल्जार बनाएको टेबहाल (भिडियो रिपोर्ट)
पाँच जना मुख्यमन्त्री धरापमा, यस्तो छ अंकगणित
एमाले ब्युँताउने तयारीमा ओली !
१ हाम्रा विद्यार्थी नै हाम्रा ब्रान्ड एम्बेस्डर हुन् : समीर शर्मा
२ न्यायाधीशहरुलाई गगन थापाको आग्रह– धर्म नछाडिबक्स्योस्, विवेक लगाइबक्स्योस्
३ उखु किसानद्वारा फेरि आन्दोलन घोषणा
४ इजरायलले नेपाली कामदारलाई स्वदेशीसरह सेवासुविधा दिने
५ तेजाबपीडितलाई आयल निगममा रोजगारी